स्वस्थ खानाबाट एसिडिटी उत्पन्न हुन्छ ? - स्वस्थ खानाबाट एसिडिटी उत्पन्न हुन्छ ?
स्वस्थ खानाबाट एसिडिटी उत्पन्न हुन्छ ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ भदौ, 12:17:07 PM
काठमाडौं । कुनै–कुनै खानाले हाम्रो शरीरमा ग्याँस अर्थात् एसिडिटी उत्पन्न गर्नसक्छ । खाना हेल्दी भए पनि यस्तो समस्या देखापर्न सक्छ । स्वस्थ खानाबाट पनि एसिडिटीको समस्या हुने भएकाले खाना बनाउने तरिकामा केही परिवर्तन ल्याउन सके यस्तो समस्या हटाउन सकिन्छ ।
सिमी : राजमा प्रोटिनले भरिपूर्ण सिमी फाइदाजनक छ । सिमी फाइबर तथा एन्टी अक्सिडेन्टले भरिपूर्ण हुन्छ । सिमी हरेक व्यक्तिका लागि त्यति नै उपयोगी हुनुका साथै लिबरका बिरामीका लागि पनि फाइदाजनक छ ।
यद्यपि कतिपयलाई सिमी खाँदा एसिडिटीको समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यस्तो समस्या भए सिमीलाई पकाउनुअघि रातभरि पानीमा भिजाउनुपर्छ । यसले गर्दा राजमा सजिलै पचाउन सकिन्छ र एसिडिटी पनि हुन दिँदैन ।
लसुन र प्याज स् वैज्ञानिक हिसाबले मानिसहरू प्याज र लसुनको सेवन फाइदाजनक छ भनेर बढी सेवन गर्छन् । यसले क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्छ । क्यान्सर भएपछि प्याज तथा लसुनको सेवन बढाउन सुझाव दिइन्छ । लसुन र प्याज जति फाइदाजनक भए पनि धेरैका लागि यो एसिडिटी बढाउने कारण पनि हो । यदि एसिडिटीको समस्या छ भने प्याज र लसुनलाई तरकारी वा दालसँग पकाएर वा झानेर खानुपर्छ ।
दाल : प्रोटिनले भरिपूर्ण दालले स्वास्थ्यलाई दुरुस्त राख्न सहयोग गर्छ । बिरामी हुँदा पनि डाक्टरले दाल, भात एवं रोटी खाने सल्लाह दिन्छन् । यति मात्र होइन गर्भावस्थामा महिलालाई दालको सेवन बढाउने सल्लाह दिइन्छ । यद्यपि दालले पनि एसिडिटी बढाउन सक्छ । पकाउनुभन्दा केही समयअघि पानीमा भिजाउँदा दालको एसिडिटी बढाउने समस्या कम हुन्छ । एजेन्सी
२०७५, १७ भदौ, 12:17:07 PM